ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်များ နှင့် ပေါက်ကရ အတွေးများ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်များ နှင့် ပေါက်ကရ အတွေးများ ….
ကမ္ဘာကျော် အဆိုအမိန့်များ နှင့် ပေါက်ကရ အတွေးများ ….
Posted by khinmintatthu on Jun 22, 2010 in Critic, History |5comments
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အပျင်းပြေရယ်မောနိုင်ပါစေ
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့အတွေး အရေး အဆို အမိန့် များ ကို ဖတ်ကြည့် မိရင်း ၊ကမ္ဘာ မကျော် ဖွားကိ က ပေါက်ကရ တွေးကြည့်မိတယ် ၊ သူတို့ မှန်သလား ကိုယ်မှားသလား လို့၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုရာဆွဲတွေးလေ့ရှိတဲ့ အကျင့် ၊ ခေါင်းမာတတ်တဲ့ အကျင့် က သေရာပါ ဖျောက်မရ ဆိုသလို ရှိနေတာ မို့တွေးမိတွေးရာ တွေကို ရေးမိရေးရာ ရေးချလိုက်မိတယ် ။ အမှားပါက ပြင်ဖတ်ကြပါ ။ ( ကိုယ်မှန်တယ်ထင်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၊ ကိုယ့်အမှားတွေကို ထောက်ပြရန် မလိုပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါတယ် ) ။
အဒေါဖ့်ဟစ်တလာ က ပြောခဲ့ တယ် “သင်ဟာ တကယ်လို့ နိုင်ခဲ့ ရင် ဘာမှ ရှင်းပြနေစရာ မလိုဘူး ။ ဒါပေမဲ့ရှုံးသွားခဲ့ ရင် တော့ ရှင်းပြဖို့ တောင် ဒီနေရာမှာ ရှိမနေသင့် တော့ဘူး ” တဲ့။
ဒါကြောင့်ပဲနေမှာ ..သူ့ တပည့်ကျော် ကိုယ်တို့ ရဲ့ဘဘကြီး က ဘယ်လိုမှ အရှုံးမပေးတာ ၊ ဘာကိုမှ လည်းရှင်းမပြတော့တာပေါ့ ။ အပြိုင် အဆိုင်မဲ့အနိုင်တွေနဲ့ ချည်းပါပဲလေ။
အီဗရာဟင် လင်ကွန်းက ပြောခဲ့တယ် ။ “လူတိုင်းကို ယုံကြည်ရင် အန္တရာယ်များတယ် ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မယုံကြည်ရင် အလွန် အန္တရာယ်များ တယ်” တဲ့ ။
ကိုယ်ကကျူးရင် ကိုယ့်ဒူးတောင်မှ မယုံရ လို့ရှေးလူကြီးများကလည်း ပြောခဲ့ကြသေးတယ် ။
အင်း ဒီလိုသာဆို ခက်ချေပြီ ။ တလောကလုံး ဘယ်သူမှ မယုံကြည်ရပါလား ။
ဒါကြောင့် ဒီလူကြီး ဒီလို လုပ်တာ နေမှာ ပဲ ။ ကျော် နှစ်ကျော် တို့ ဒုက္ခ နဲ့ လှလှ တွေ့ ရရှာပြီ။
ဤနေရာမှ ရယူသော ပုံလေးပါ ။ ကိုဟန်လေး ရေးဆွဲ ထားတာပါ
“ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လူတိုင်းစဉ်းစားကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မစဉ်းစား ကြဘူး ” တဲ့လီယို တောစတွိုင်း က ပြောခဲ့ တာပဲ ။
ဒို့ဘဘကြီး လည်း ဒီစကားကို မှတ်သား လိုက်နာ ပုံရတယ် ။ သူ့ ကိုယ်သူ ဘယ်တော့ မှ ပြောင်းလဲ မှာ မဟုတ်ဖူး ။
အိုင်းစတိန်းကပြောခဲ့တာ “ အကယ်၍ လူတယောက်ဟာ သူ့ ဘဝ တလျှောက်လုံးမှာ ဘယ်သောအခါမျှ အမှား တခု မလုပ်ခဲ့ ဟူထင်ပါက ထိုသူမှာ သူ့ ဘဝတလျှောက်လုံး၊ မည်သည့် အရာ အသစ် ကိုမျှ ကြိုးပန်းလုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်း မရှိ ဟု မည်၏ ”
မမှားသော ရှေ့ နေ ၊ မသေသောဆေးသမား ။ လူဆိုတာ မှားကြမှာပဲလေ ။ များများလုပ်သူ များများ မှားမယ်ပေါ့ ။ဘာမှမလုပ်သူ ဘာမှ မမှားဘူးပေါ့ ။
အမှားတွေချည်း ရွေးလုပ်နေသူဆို အမှားတရံ များစွာ နဲ့အမှန်တရားဆိုတာ မရှိတော့ ပေဘူးပေါ့ ။ သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့၊ များများကြီးလုပ်နေလို့များများပဲ မှားရတာပါ ။ ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ် ။
ချားလ်စ်ဒစ်ကင် ကပြော ခဲ့တယ် ။ “ ယုံကြည်မှု ၊ခင်မင်ဆက်ဆံမှု ၊ ကတိ ၊ အသည်းနှလုံး ၊ ဒီ ၄ မျိ်ုးကို မကွဲပျက်စေ နဲ့၊ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဒီ အရာ ၄ မျိ်ုး ကွဲပျက်တဲ့အခါ မှာ ဘာ အသံမှ မမြည်ပေမဲ့အတော်လေးနာကျင်စေလို့ ပါ ” တဲ့ ။
အို ၊ ကိုယ်မနာ ရင် ပီးတာပဲလေ ။ သူ့ ဟာ သူ ဘာသံ မြည် မြည်ပေါ့ ။ ဒီအရာ ၄ ခုက ဗိုက်ပြည့်စေတာမှ မဟုတ်တာ ၊
ဒီတော့ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆွေမျိ်ုးသားချင်းတတွေ စားရ ဝါးရ ဝတ်ဆင်ရရင် ဘယ် ယုံကြည်မှု ၊ ခင်မင်ဆက်ဆံမှု ၊ ကတိ ၊ အသည်းနှလုံး တွေမှ အရေးမကြီးလှပေဘူး ။ ( ချားလ်စ် အတွေးက နုပါသေးတယ် ။ တို့ တတွေ ဘဘကြီး အိပ်နေသလောက်တောင် မရှိပါလား ကွယ် )
ဝီလီယံ ရှိတ်စပီးယား ပြောခဲ့ တဲ့အောင်မြင်မှု အတွက် အချက် ၃ ချက် ..“ သူများထက် ပိုသိရမည် ။ သူများထက် ပိုလုပ်ရမည် ။ သူများလောက် မျှော်လင့်မှု မထားရ ” တဲ့ ။
ဘဘကြီးလည်း သူများတွေထက် ပိုသိပါတယ် ။ သူများတွေထက် ပို(ဖိ) လုပ် ပါတယ် ။ သူ နဲ့ သူ့ လူတွေ စားဖို့ဝါး ဖို့။့ သိပ်မျှော်လင့် မထားပါဘူး ။ နေရာ ဖယ်ပေးဖို့။
မာသာထရီဆာ က ပြောခဲ့ တယ် “ အကယ်၍သင်ဟာ လူများအတွက် တရားမျှတရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်နေရလျှင် ထိုသူများအား ချစ်ရန် အချိန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ” တဲ့ ။
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ် ဘဘကြီးခမြာ သူ့ပြည်သူတွေကို ချစ်ရန် အချိန်လုံးဝ မရှိခဲ့တာပေါ့ ။ဒါသူ့ အပြစ်မဟုတ်ရှာပါဘုး ။ ရှေ့ ကလူတွေပြောသွားခဲ့ကြတဲ့ အတိုင်း လုပ်နေရှာသားပဲ လေ ။
မှတ်ချက်။ မေးလ်ထဲမှ ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။
ဟစ်တလာက သေသွားပြီ။ သူ့ဆရာအရင်းက ကင်ဂျုံအီလ်…
သန်းရွှေ သေသွားပီ…သူ့အဖေအရင်းက ဂုတ်ကျားကြီးဟ
တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ် ကမ္ဘာကြီးကိုသင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆို သင့်အတွေးကိုသင် ပြောင်လဲဖို့လိုလိမ့်မယ် လို့တော့ကြားဖူးတယ် ….. ကျွန်တော်က ဒီအတွေကိုပိုကြိုက်တယ် … သန်းရွှေ မြန်မာပြည်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆို သင်၏လူလိမ်လူညာအတွေးများကို ပြောင်းလဲဖိုလိုလိမ့်မယ် …… ဟိဟိ သားပြောတာမှန်ဝူးလား ….